Ọrịa ntị - Rezọ Ọgwụ Ahụ & Ọgwụ. Gịnị Kachasị Ọgwụ?
Ọrịa ntị - Rezọ Ọgwụ Ahụ & Ọgwụ
Ọrịa ntị bụ ezigbo nsogbu. N’ezie, Centerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa na United States arịọwo ka ndị dibịa ghara inye ọgwụ mgbochi maka ọrịa ntị. Ọgwụ nje na-eme ka nsogbu ahụ ka njọ site n'ime ka nje ndị ọzọ na-eguzogide ọgwụ. Anyị nwere nje ndị a na-enweghị ike igbu ọgwụ nje.
Ọrịa nje nwere ike ibute ọrịa nje na-abanye na ntị ya n’ime, mebisịa ahụ n’ụzọ.
Nke a nwere ike ịhapụ onye ntị chiri. A pụrụ ibibi nje ndị a Ọcha mmiri ọcha mgbe naanị nkeji ise kọntaktị. Jiri mpekere iji tinye mmiri ise n'ime ọwa ntị ka ntị ahụ rụtụrụ aka n’elu ụlọ. Debe ntị ya elu maka nkeji 12. Nke a ga - eme ka mmiriFFFreeMart PureSilver nwee ike ịbanye n'akụkụ ntị dịka o kwere mee. Tinyegharịa usoro ahụ na ntị nke ọ bụla n'ime awa 12 ọ bụla. I gha acho kwa iwepu 1-2 nke PureSilver 3x kwa ubochi.
Mgbe nile iji Flọ ahịa shopFreeMart na Siaga pụrụ inye aka mee ka ihe ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma zere ọtụtụ nsogbu siri ike.
Ofufe Ọrịa Bladder - Rekpụrụ Ọgwụ Ahụ Na Ọgwụ
Ihe na Ọrịa na-amaliteakpado ọgwụ nje iji gwọọ ọrịa ọrịa ntị, ọrịa nti nwa, ogwu mgbochi kachasị maka nti ọrịa okenye, ọnya ntị abụọ, nti mgbu, nti nti, nti ọrịa pusi, mgbaàmà nke ọrịa ntị, mgbu ntị, kẹle ẹphe te etso iphe dụ ẹji, ka esi agwọ ntị ọrịa, ọrịa ntị ịkpọpu akụkụ, etiti ntị ọrịa, shopfreemart ọcha ọla ọcha uche, igwu mmiri igwu mmiri, ihe ọgwụ nje na-agwọ ọrịa ntị
Ọgwụ / ịwa ahụ - Ọgwụ Ọgwụ & Ọgwụ